Ithegi: ubudlelwane beqonga lobukrelekrele | Martech Zone
Ithegi: ubudlelwane beqonga lobukrelekrele
Ukuhambelana: Sebenzisa iNethiwekhi yakho ukuVala iiNtsebenzo ezingakumbi ngale Platform yoBukrelekrele bobuhlakani kunye nohlalutyo
Isisombululo esiqhelekileyo sokulawulwa kobudlelwane babathengi (CRM) liqonga elihle le-static… indawo yogcino lwedatha, imisebenzi yabo, kunye; mhlawumbi, ezinye indibaniselwano nezinye iinkqubo ezibonelela ngengqondo eyongezelelweyo okanye amathuba okuthengisa. Kwangelo xesha, lonke uqhagamshelo kwindawo yogcino lwedatha yakho lunamandla, unxibelelwano olunempembelelo kwabanye abathengi kunye nabenzi bezigqibo kwishishini. Olu kongezwa kwenethiwekhi yakho alufakwanga, nangona kunjalo. Buyintoni Ubukrelekrele boBudlelwane? Ubuchwephesha bobuchwephesha bobudlelwane buhlalutya idatha yeqela lakho kwaye lwenze ngokuzenzekelayo igrafu yobudlelwane efunekayo